Etu ị ga-esi họrọ diffusers? Ndị na-ere ahịa | AromaEasy
Ọrụ nrụpụta ọrụ
You mụtala banyere uru mmanụ dị ezigbo mkpa bara? Ọ bụrụ otu a, inwere ike ịgụnye ha n'ime ụzọ ndụ gị, mana amabeghị otu kachasị mma isi mee ya. Otutu ndi mmadu achota mmanu di nkpa n’ihi na ha na-ekwusi ike n’ulo ma obu n’ebe ha na-aru oru ma na-acho uzo ozo ha si egbo mkpa ha. Ọ bụrụ na ọ dị ka gị, mgbe ahụ anyị na-akwado gị ịzụta diffuser - obere ngwaọrụ eletriki nke na - achọpụta mmanụ dị mkpa iji mebie isi ha n'ime ụlọ, cubicle ma ọ bụ n'ọfịs. Tupu ịzụrụ ihe nkesa dị mkpa dị na mmanụ, lelee ozi ndị na - eso ma hụ otu onye na - enye onye na - enye ya nsogbu.
Typedị na ụdị diffuser
A ga - ekewa ụdị ọba dị iche iche dị iche iche ụzọ anọ - ultrasonic, atomization, evaporation na kpo oku. Kpụrụ ndị a na-ekpebi ụdị usoro usoro ihe nlere ahụ jiri rụọ ọrụ ma nwee ike ịdị iche iche n'ọtụtụ ma ọ bụrụ na ị nwere mkpa atomization akọwapụtara.
Ihe nrụpụta ultrasonic yiri nke iru mmiri n'echiche na ọ chọrọ mmiri iji rụọ ọrụ. Imirikiti ụdị ultrasonic nwere ike okpukpu abụọ dị ka iru mmiri, nke na-eme ha bara uru nke ukwuu na ọnọdụ ihu igwe akọrọ ma ọ bụ n'oge ọnwa oyi. Ihe nkesa ultrasonic na - ewebata mmiri na mmanụ dị mkpa ma chụsasịa ya na ikuku. N’agbanyeghi na ndi mmanu mmanu ndi a di nkpa na aru oru n ’uzo di nfe, i kwesiri imata uru na ọghọm dị n’uche ha tupu ịzụta ha.
Ihe nkesa ultrasonic bụ ụdị kachasị na ahịa taa, nke pụtara na ị nwere ike ịchọta atụmatụ dị iche iche na ụdị niile
Ọ na-adị ọnụ ala karịa ụdị atomization
Ọtụtụ mgbe dị jụụ karịa usoro atomization
Nwere ike okpukpu abụọ dị ka ihe dị omimi
Water chọrọ mmiri iji gwuo mmiri
Achọrọ nhicha mgbe ụfọdụ
Achọpụtaghị mmanụ ndị dị mkpa Citrus maka ụdị a n'ihi na acid nwere ike mebibie ihe ndị dị na mmanụ ndị a n'ime oge.
Ọtụtụ ụdị dị ka ọkụ nwere ọkụ a na-agaghị agbanyụ, na-eme ka ha bụrụ ihe a na-achọsi ike na mpaghara gbara ọchịchịrị
Mmiri nsị / mmanụ adịghị arụ ọrụ dị ka ihe atomization
Ihe nkesa ọgwụ anaghị achọ mmiri mmiri iji rụọ ọrụ. Kama, ha na-eji obere ikuku emepụta obere irighiri site na mmanụ dị mkpa nke ngwaọrụ ahụ na-agbasa n'ime ikuku. Mmanụ ahụ na-esi ike siri ike n'ihi na mmanụ etinyere mmanụ. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ njirimara kachasị mkpa nke ụdị ndị a, atomizing diffusers nwere ọghọm nke ha nke na-eme ka ha ghara ịdị mma n'ọnọdụ ụfọdụ.
Water chọghị mmiri; Ọtụtụ ụdị anaghị achọ nrụzi ọ bụla
Imirikiti ụdị ndị a gụnyere oge na-enye gị ohere ijikwa oge nke mgbasa ahụ
Ta ụta siri ike karịa nke ụdị ndị ọzọ na-ekewapụta
Ọtụtụ n'ime ụdị enweghị obere ọkụ ma ọ bụ enweghị ọkụ, na-eme ka ha dị mma maka mgbasa na abalị
Ọ na-abụkarị ibu karịa ụdị ndị ọzọ na-eme ihe nretọ
Jiri mmanụ ngwa ngwa karịa ụdị mgbasa dị iche iche
Na-ekwucha, ụdị diffuser kachasị ọnụ
Evaporative ofufe diffuser
Dị ka aha ahụ na-egosi, ndị na-ekpu ume na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ site na ịwụsị mmanụ. Karịsịa, onye ọrụ na-etinye mmanụ ole na ole nke mmanụ ahụ dị mkpa n'ime paịpụ ahụ dị n'ime n'ime diffuser, dị ka Orbit Fan diffuser, wee kpochapụ ya. Ozugbo emechara nke a, a na-efesa mmanụ ahụ na onye fanyere ngwa ọrụ ahụ. Modelsfọdụ ụdị (gụnyere ihe onwe, pendants, ọla aka, wdg) dị mfe nke na ha anaghịdị eji ọkpọ - ha na-ahapụ ikuku mmiri gbara ha gburugburu na-ewepụ mmanụ ahụ.
N'ikwu okwu, ụdị elektrọn dị ọnụ ala karịa nke ịzụta na ụgwọ ọrụ
Ọtụtụ ụdị dị obere mkpanaaka na ezigbo njem
Ha nwere obere mkpuchi, na-eme ka ha dị mma maka obere mpaghara dịka desks ma ọ bụ ụlọ ịsa ahụ
Ikike ịmị mkpụrụ adịghị ike ma nwee ike belata ọgwụgwọ ọgwụgwọ
A ga-edochiri oghere ndị na-adọrọ adọrọ ma nụchaa
Ọtụtụ ụdị na-adabere na batrị ma ọ bụ ọdụ ụgbọ USB maka ike
Onye na-ahụ maka ikpo ọkụ
Onye na - eme ya bụ ụda ya - onye na - ekpo ọkụ na - eji USES ekpochapu mmanụ dị mkpa. Na mkpokọta, ụdị ngwaahịa a (dị ka igwe ọkụ mmanụ eWarm dị anyị mkpa) anaghị eji ọkụ eletrik. Kama, ha na-eji kandụl iji kpoo mmanụ n ’ala. Ọ bụ ezie na nke a na - eme ka onye na - ahụ maka ikuku na - enwe akụ na ụba karịa ụdị ndị ọzọ, ikike a na - abịa n'ịkwụ ụgwọ nchịkwa nke mmanụ. Na mgbakwunye, ha anaghị etinye aka na mpaghara ọ bụla na-ekweghị ka oku ọkụ mepere.
Udu mmiri adịghị ọnụ
Enweghị ike pụtara na enwere ike iji ha ọbụlagodi na enweghị ọkụ eletrik
Mfe dị ọcha na ịnọgide na-adị
Ike agaghị enwe ike ịchịkwa ike ma ọ bụ ogologo oge nke mgbasa ya
Adaghị adaba maka iji rụọ ọrụ na gburugburu ọfịs ma ọ bụ ebe ọ bụla ebe ojiji nke ire ọkụ na-ada mbà
Ngwakọta dị iche iche nke kandụl na mmanụ na-ebelata uru nke aromatherapy
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụwa na-agbasa ebe niile buru ibu nke na a ga-enwerịrị ihe nlereanya dabara nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na onye na-ahụ maka dif difer na ime ụlọ gị ma ọ bụ n'ọfịs gị, ụdị ultrasonic zuru oke nwere ike ịbụ ihe ị na-achọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ onye nkesa dị ike iji jupụta oghere buru ibu, mgbe ahụ atomizer nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma. Ndị chọrọ njem njem ma ọ bụ desktọpụ desktọpụ nwere ike ịchọta ezigbo ihe nlereanya n'ụdị ọpụpụ ahụ. N'otu oge ahụ, radiators dị mma maka ndị na-achọ ọgwụ aromatherapy n'ezie. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ gbasara ọdịiche nke ụdị, biko nweela onwe gị ịkpọtụrụ otu ndị nnọchite anya ndị ahịa anyị nwere omume enyi.
Nke a na ntinye e gwa ke Mgbanwe. Bookmark na Permalink.